ट्याक्सीवालाले लुट मच्चाउन नपाउने भन्दै सरकारले टुटल र पठाओलाई यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दियो निर्देशन – Online Nepal
March 13, 2020 194
निजी प्रयोजनका लागि निकालिएका सवारीसाधनमा यात्रु बोक्न नपाइने भन्दै मंगलबार ट्याक्सी व्यवसायी यातायात विभागमा पुगेका थिए । लगत्तै विभागले सूचना जारी गरेको थियो । राइड सेयरिङ टुटल र पठाओमाथि यसअघि नै दुईपटक प्रतिबन्ध लगाएर पुनः फुकुवा गरिएको थियो । तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको पालामा टुटल र पठाओ बन्द गर्ने प्रयास भएको थियो । राजधानि दैनिकमा खबर छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्द गर्न चाहेनन् । चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्रीले नियमन गरेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने पक्ष लिएपछि टुटल र पठाओ पुनः निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो ।
Prevकोरना भाइरसका बिरामी नेपालको बोर्डर नजिकै भारतमा भेटीएपछि नेपालले बन्द गर्यो पाँच नाका !
Nextअडियो बारे मालाले मुख खोलिन् ! पुण्यले खुट्टा ढोगे, हेमाको दा’दागि’री (भिडियो सहित)
खुसीको खबर : कोरोनाभाइरसले देखायो आफैं समाप्त हुने यस्तो लक्षण!
सोमबारदेखि ५ दिन देशभर भारी वर्षा हुने